के तपाईलाई तेम्पुरा मनपर्छ? यी तिन वटा ठाउको तेम्पुरा चाख्नै पर्ने हुन् | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > के तपाईलाई तेम्पुरा मनपर्छ? यी तिन वटा ठाउको तेम्पुरा चाख्नै पर्ने हुन्
जापानको कम्फर्ट फुडको बिषयमा कुरा गर्दा खेरि तेम्पुराको चर्चा निकै हुने गर्दछ। यसको लोकप्रियताले गर्दा जापानमा मात्र नभएर देश बाहिर पनि धेरै तेम्पुरा स्टोर खुलेका छन्। तेम्पुरा यति लोकप्रिय छ कि अन्य रेस्टुराण्टले पनि यसलाई आफ्नो मेनुमा राखेको पाइन्छ। तर यदि हजुरलाई तेम्पुराको त्यो अद्वितीय स्वाद लिन मन छ भने हजुर तेम्पुरानै विशेषता भएको स्टोर जानु पर्ने हुन्छ। तल दिईएका तिन ठाउमा हजुरले जापानकै सबसे मिठो तेम्पुरा पाउनु हुनेछ।
#神田#金子半之助 どうも、かっつです🙋 #海老 #ししとう #穴子 #半熟卵 #海苔 穴子がデカすぎて、金子半之助を通り越して、金子全之助😭笑 全之助については、かっつ飯ブログに書いてるので見て下さい🐵 イカと半熟卵を残して、TKGにして食べます🙋 めっちゃくちゃ美味しい😊 #天丼#天ぷら#海老天#TKG #飯テロ#食テロ#ランチ#神田ランチ#秋葉原#小川町#たまごかけごはん #デカ盛り#海鮮丼#海鮮#tempura #shrimp #japanesefood
かっつ(飯テロリスト準二級)さん(@katsu_food)がシェアした投稿 – 2018年10月月17日午前2時09分PDT
खानेको-हान्नोसुके जापनको थुप्रै लोकेसनमा छ। यसको मुख्य साखा भने टोकियोको निहोन्बाशि भन्ने ठाउमा छ। यो तेम्पुराको लागि बिसेष भएता पनि महँगो भने छैन। यहाँको मेनुको मूल्य निकै रिजनेबल छ। यसको विशेषता भनेको यसले तेम्पुरा फ्राई गर्न प्रयोग गर्ने बिदेशी प्रबिधि हो। यो पसल भातमा हालिने आफ्नो एदोमाए ससको लागि पनि बिसेष छ। यो बाहेक यो रेस्टुराण्टको केहि साखामा तेम्पुरा-मेशी पनि पाइन्छ। यसमा ग्राहकले काउन्टरमा बसेर तातो तातो पाक्दै गरेको तेम्पुरा भात संग खान मिल्दछ। यो सेटको १००० येन जतो पर्दछ र जापानी अचार अनि मिसो सुप संगै आउदछ।
जाने बाटो (थुप्रै साखा भएकोले हामी यहाँ एउटा मात्र देखाउनेछौ)
今夜は天ぷら屋さんに連れていっていただきました！！ 三代続く天ぷら屋さんらしく、雰囲気もあって、素敵！ 油はなんと胡麻油！ 美味しくいただきました😊 ご馳走さまでした😊 #時間がまだあったから、メキシコ料理屋さんにも寄っちゃった( ^ω^ )
横山みれい(Mirei Yokoyama)さん(@mirei_yokoyama)がシェアした投稿 – 2019年 2月月1日午前8時42分PST
तेन्मो निहोन्बाशिमा रहेको निकै क्लासिक पसल हो जसले एदोमाए तेम्पुराको स्वाद करिब १३० वर्षा अगाडि देखि बाड्दै आएको छ। यो पसल सन् १८८५मा मोसाबुरो ओकुदाले सुरु गरेका हुन् र त्यसबेला देखि अहिले सम्म तेम्पुरा फ्राई गर्न तीलको तेल प्रयोग गरिन्छ। यो भनिन्छ छ कि उनले पहिला बाटोमा स्टल राखेर तेम्पुरा बेच्दथे पछि आफ्नै रेस्टुराण्ट खोले। यहाँ पाइने मेनुले पनि एदो समयको झझल्को दिने गर्दछ। उनीहरुले एदो समयमा प्रयोग गरिने सामान र प्रबिधि अझै बचाउदै आएका छन्। यो जापानको निकै पपुलर ठाउ हो। त्यसैले यदि हजुर यहाँ जाने सोच्दै हुनु हुन्छ भने अग्रिम बूकिंग गर्नु पर्ने हुदछ।
昨日、ドナさん篠木さんのオススメで行った天ぷら屋。 ひしめく高円寺のカオス感の中、ひっそりとカウンターのみで営業。 職人気質ビンビンの3人が繰り出す空気感と、店構えのミスマッチさ。 ただ、卵の天ぷら乗せご飯、天ぷら7品、みそ汁漬物付きで1600円。 味はさすがの食べログ5000位内、凄過ぎた！ イカのシソ巻きは神でした。。。 そして、店主の卵の殻投げ。。。 #高円寺 #天すけ #天ぷら
TAKAHIRO KUDOSEさん(@takahiro_kudose)がシェアした投稿 – 2015年 6月月17日午前8時13分PDT
यो अर्को स्पेसियालिटि तेम्पुरा पसल हो। यो टोकियोको कोएनजी भन्ने ठाउमा छ। यहाँका तेम्पुरा बनाउने सेफहरुमा बिसेष स्किल रहेको छ। यो पसलको सफ्ट बोइल्ड एग तेम्पुरा निकै लोकप्रिय छ। यो निकै क्रिमि, मिठो र आफुलाई रोक्न नसकिने खालको छ। त्यसैले पनि होला यो पसलमा सधै लामो लाइन लागेको देखिन्छ। यो पसलमा थोरै मात्र सिट भएकोले पनि यदि हजुर यहाँ खान चाहनु हुन्छ भने कम्तिमा पनि १ घण्टा पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुर पहिलो सिटमा बस्न पाउनु भयो भने सेफहरुले तेम्पुरा बनाइरहेको आफ्नो आखा अगाडि नै देख्नु हुनेछ। मिठो तेम्पुरा खादै सेफले पकाउदै गरेको देख्नुको छुट्टै मजा हुन्छ।
तेम्पुरा धेरै जस पसलमा पाइने, त्यति मात्र नभएर सुपा वा कम्बिनीको बेन्तोमा पनि किन्न पाइन्छ। तर पनि यदि हजुर निकै मिठो र परिस्कृत तेम्पुरा खान चाहनु हुन्छ भने मैले माथि दीएको यी तिन ठाउमा जानु होस्। यी ठाउले हजुरलाई निरास बनाउने छैन